एफडीएले भर्खर यसको वजन घटाउने औषधिलाई अनुमोदन गर्‍यो जुन एक खेल परिवर्तनकर्ता हो
संयुक्त राज्य अमेरिकामा मोटोपना दर एकदम अविश्वसनीय दरमा बढ्दैछ। यो अनुमान गरिएको छ कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबै वयस्कहरूको लगभग %०% मोटोपनका छन् र थप %०% कम्तिमा बढी तौलका छन्। तथ्या .्कहरू चिन्ताजनक छन्, विशेष गरी शरीरको उच्च वजनसँग जोडिएको बिरामीहरूको संख्यासँग। अत्यधिक तौल वा मोटोपनले नाटकीय रूपमा टाइप २ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, निद्रा गडबडी, हृदय रोग, र केही क्यान्सर विकासको जोखिम बढाउँदछ।
दुर्भाग्यवश, धेरै सामाजिक कारकहरूले फिटनेस प्रमोट गर्न प्रयासहरू अवरोध गरेका छन्। हामी अनगिनत खाका विकल्पहरूले घेर्दछौं, र केहि अस्वस्थ व्यक्तिहरू प्राय: सजिलो र सस्तो पनि हुन्छन्। धेरै अमेरिकीहरूको कामकाजको काम गर्ने बानीले व्यायाम गर्ने तालिकामा थोरै ठाउँ छोड्दछ, विशेष गरी वयस्कहरूको अधिकांश भागले दीर्घकालीन तनाव महसुस गरेको खण्डमा। यो कारकहरूको संयोजन हो जसले वजन बढाउनको लागि अविश्वसनीय रूपमा सजिलो बनाउँदछ र कम गर्न कडा छ। अब संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन नयाँ औषधि स्वीकृत मोटाई को उपचार को लागी, तर वास्तव मा यो कुनै नयाँ कुरा होइन।
यो औषधिलाई Wegovy भनिन्छ, र यो पहिले नै टाइप २ मधुमेह को उपचारको लागि अनुमोदन भइसकेको छ। भारी लिफ्टि does गर्ने Wegovy कम्पाउन्डलाई सेमाग्लुटाइड भनिन्छ, र यो प्राकृतिक हार्मोनको एनालग हो जसले भोकको भावनालाई असर गर्न सक्छ। यसको गुणले मधुमेह भएका व्यक्तिहरूका लागि विकल्प बनाउँदछ (यदि उनीहरूले साइड इफेक्टहरू सम्हाल्न सक्छन्), र औषधीको साथ धेरै बिरामीहरूको उपचार गरिएको छ, डाक्टरहरूले नाटकीय तौल घटाउनु भनेको साइड इफेक्टको रूपमा देखाए।
जस्तो कि प्राय जसो कम्पनीले महसुस गरे कि यसको कुनै एक औषधि विभिन्न रोगहरूको उपचारको लागि उपयोगी हुन सक्छ, औषधी कम्पनी नोभो नर्डिस्कले मोटापाको उपचारमा सेमाग्लाइटाइडको लागि स्वीकृति लिने निर्णय गरेको छ। एफडीए अब ड्रग लाई हरित बत्ती दिएको छ। परीक्षणहरूमा, औषधि - खाना र व्यायामको संयोजनमा - बिरामीहरूलाई समान जीवनशैली परिवर्तनको साथ एक प्लेसबो लिनेहरू भन्दा १२% भन्दा बढी वजन कम गर्न मद्दत गर्‍यो।
यो औषधि जस्तो लाग्न सक्छ आशाजनक, यो यसको जोखिम बिना छैन। साइड इफेक्टमा पखाला, बान्ता, टाउको दुख्ने, र पेट दुखाई समावेश हुन सक्छ। औषधिको पशु परीक्षणहरूमा, थाइरोइड ट्यूमर केही केसहरूमा देखा पर्‍यो, यद्यपि ती समान ट्युमरहरू मानव परीक्षणहरूमा देखा पर्दैन। जे होस्, औषधीले बक्समा चेतावनी दिन्छ कि यसले थाइरोइड ट्यूमर विकासको सम्भावना बढाउन सक्छ।
अन्त्यमा, दुर्लभ चिकित्सा अवस्था बाहेक आहार र व्यायामको पर्वाह बिना शरीरलाई तौल गुम्नबाट रोक्छ, मोटोपनाको उत्तम समाधान भनेको प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ र चिनी र चिनीमा कम खाना हो। बोटबिरुवा र उच्च-गुणस्तरको प्रोटीन, साथै। धेरै शारीरिक गतिविधि को रूप मा। तपाईका जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न अक्सर यी कारकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुन्छ, तर यदि तपाई तौल घटाउन कटिबद्ध हुनुहुन्छ भने यो सधैं तपाईंको पहिलो कदम हुनुपर्दछ। एक मोटापा औषधि मद्दत गर्न सक्छन्? हो, यो सम्भव छ, तर यो कुनै संयोग छैन कि औषधि परीक्षणहरूमा यो आहार र व्यायाममा परिवर्तनको साथ निर्धारित गरिएको थियो।
प्राइम डे २०२० प्रारम्भिक विस्फोट: प्राइम सदस्यहरूले केवल Bl १। .2021 for मा ब्लिंक मिनी क्यामेराहरू पाउन सक्छन्!	मूल्यहरूको सूची:34,99 $	मूल्य:19,99 $	तपाईंले बचत गर्नुभयो:$ २.०० (%%)
यो लेख पहिलो पटक https://bgr.com/sज्ञान/obesity-drug-fda-approved-5929931/ मा देखा पर्‍यो
TELES RELAY 52536 पोस्ट 1 टिप्पणी